Disiki | Mutemo Makambani Dubai
RUDZIDZA VERENGA URI KUTI URATIDZE CHEMA. IYI TERESI YEMABASA INONODZESA ZVINESI ZVINOGONA KUTI AMAL KHAMIS ANOPA MAHARA WWW.LAWYERSUAE.COM (kubva zvino zvinodaidzwa mugwaro iri se "AMAL KHAMIS" "MITEME AUA" "Isu," "Isu,")
NOKUFUNGA UYE KUSHANDA ISHURE, UNOGONA KUVEDZWA NESERO DZESHURE DZESVI PAMUSORO PAMUSORO .KUTI UNGATENDA KUTI VABVUNZWE NEZVITSAUKO ZVEKUSHANDA, UNOGONA KUTI UVANZVIDZE UYE KUSHANDISA BASA. IYO WEBSITE INOTARISWA UYE INOGADZWA NA AMAL KHAMIS ANOBVARURA MUBVUNZO WEMutemo.
UNOZVIVA KUTI AMAL KHAMIS IYO INOGADZIRA UNYAYA IYI Pane imwe nguva, uye ZVINHU ZVINONYANYA ZVINOGONA KUTI ZVINOGONESESA IMMEDIATELY PONI KUTI KUTI KUTI KUPENYUWA KWESANGANO YAKAITWA PENzvimbo. UNODA KUTI UCHONESE ZVESANGANETSI PASI KUTI UVE KUGARA NEZVINHU ZVINOGONESESA UYE ZVINYANYA ZVINOGONA KUKOSHESA UYE KUSHANDISA URI BHONZO KUTI RUDZIDZE YAKO YEMBONERO KUTI KUTI ISANGANO YEMUFANANIDZO
Amal Khamis ipuratifomu yeruzivo rwepamutemo uye yekuzvibatsira. Ruzivo rwunopihwa nesu pamwe nezviri mukati mewebhusaiti yedu zvine chekuita nenyaya dzemutemo ("Legal Info") zvinopihwa munhu wako uye hazviite kuraira kwepamutemo. Isu hationgorore chero ruzivo urwo iwe rwaunotipa isu rwechokwadi zviri pamutemo kana kukwana, tora zviri pamutemo mhedziso, tipe maonero pamusoro pesarudzo yako mafomu, kana kushandisa mutemo kune chokwadi chemamiriro ako ezvinhu.
Isu hatisi Law Firm uye kushandisa kwako sevhisi iyi hakuzi kwehukama nehukama hukama. Iwe unonzwisisa kuti Gweta rakabvumidzwa chete rinogona kupa zano repamutemo. Kunyange Ivo Kham Khamis kana chero Ruzivo rweMutemo rwakapiwa naAmaz Khamis hari kutsiva zano repamutemo kubva kune rimwe gweta rine ruzivo rakapihwa mvumo yekuita muchiitiko chakakodzera.
Kunze kwekunge iwe ukamiririrwa neimwe nzira negweta, kusanganisira Gweta Yakanyorwa, iwe unomira pachako mune chero nyaya yepamutemo yaunoita kuburikidza neVashandi vedu.
Amal Khamis haasi "Gweta Referral Service". Dhairekitori remagweta rakaburitswa pawebhusaiti yedu rinopihwa veruzhinji mahara uye nderekungopa ruzivo chete. Amal Khamis haatsigire kana kukurudzira chero gweta kana kuita chero warandi maererano nezvikwanisiro kana kugona kwemumwe gweta.
Paunoshandisa Platform yedu, uchave nemukana wekutanga kutaurirana negweta ("Akanyorwa Gweta"). Vakanyorwa Magweta havasi vashandi kana vamiririri vaAmal Khamis. Vakanyorwa Magweta ndivo vechitatu-bato rakazvimirira makondirakiti vanotakura zvavo malpractice inishuwarenzi uye vakabvuma kupa online mhinduro, kubvunzana kushoma kana mamwe maitiro epamutemo kune vashandisi veAmal Khamis. Kutaurirana neGweta Rakanyorerwa kuburikidza naAmal Khamis HAZVIDIWI. Nekudaro, kana iwe ukasarudza kutaura neGweta Rakanyorerwa kuburikidza naAmal Khamis, ndokumbira utarise zvinotevera (a) Paunobata Gweta Rakanyorwa kuburikidza naAmal Khamis, iye kana iye anogona kukupa kubvunzana kwekutanga, kuongororwa kwemutemo kwemafomu ako kana magwaro , kana mhinduro kumibvunzo yako yepamutemo. Ndokumbira utarise kuti chero kusangana kwakadaro kunoitirwa kuve pekutanga pekubata nenyaya yepamutemo kana kugadzirisa mibvunzo yepamutemo uye chero gweta-mutengi hukama hwakaumbwa panguva yekufambidzana ikoko iri pakati pako neakanyorwa Gweta (b) Kana iwe bata Gweta Rakanyorwa kuburikidza naAmal Khamis, iye kana iye angangokubvunza iwe rumwe ruzivo maererano newe uye nezvenyaya dzako dzemutemo kuti ugadzirise zvakanaka mibvunzo yako. Nekushandisa maSevhisi edu, unobvumidza kugovana ruzivo rwakadai rwechinangwa chekuchengetedza rairo yezvemitemo pamwe negweta rinokumbira pamwe naAmal Khamis. Amal Khamis achave nekwaniso kune chero kutaurirana kunoendeswa kuburikidza nepuratifomu yedu yekuzadzikiswa uye yehunhu hunovimbisa zvinangwa (c) Paunobata Gweta Rakanyorwa kuburikidza naAmal Khamis, unodzora iwo ese maviri nguva uye kudzika kwekudyidzana. Chero gweta-mutengi hukama hwakaumbwa panguva yekufambidzana ikoko, pane zvaungasarudza, (i) kupera kana kusangana neGweta Rakanyorerwa kuchipera, kana (ii) kuenderera mberi kana iwe uchida kuita Gweta Rakanyorwa kuti uwane mamwe mabasa epamutemo. (d) Kana iwe uchida kugadzira gweta-mutengi hukama neakanyorwa Gweta rinoenderera kupfuura kushandisa kwako maSevhisi, hukama ihwohwo huchave pane chero mitemo yaunomisikidza negweta riri kutaurwa. Aya mazwi ASI anosanganisira Amal Khamis uye, kunze kwekutanga kutaurirana kwakakosha mhedzisiro kumitezo yedu, isu hatisi kuisa, kudzora kana kuvakurudzira. Semuenzaniso, Gweta Rakanyorwa rinogona kukukumbira kuti usayine chibvumirano chekumiririra zviri pamutemo maererano nezviyero zvebasa ravachaita, mutengo webasa ravo repamutemo, uye nekubatwa kwechero chipi muhomwe mari dzavanogona kuwana. (e) Akanyorwa Magweta anogona kubhadharwa naAmal Khamis weMasevhisi akaitirwa iwe, zvisinei, Amal Khamis haagamuchire chero chikamu chemari yemutemo inounganidzwa nechero magweta mune yedu network. Muzviitiko zvese, Amal Khamis haazokanganisa kana kupindira munzira ipi neipi negweta rakazvimirira rehunyanzvi. Akanyorwa Magweta anochengetera kodzero yekuramba kuita zvepamutemo masevhisi panzvimbo yako mukufunga kwavo kwega.
KUGADZIRA UYE KUKOSHESA ZVAKO ZVAKO
Amal Khamis haatore muridzi wemagwaro chero aunogadzira kana kurodha pasi nekuchengetedza uchishandisa maSevhisi edu ("Zvinyorwa"). Iwe unopa mvumo kuna Amal Khamis kuti ashandise maGwaro ako zvine chekuita nekupa maSevhisi kwauri.
Iwe unobvuma uye unobvuma kuti Amal Khamis anogona kuchengetedza aya maGwaro pamwe nekuazarura kana zvichidikanwa kuzviita nemutemo kana mukutenda kwakanaka kuti kuchengetedza kwakadaro kana kuburitswa kwakakosha kuita chero chipi zvacho chinotevera: (1) kutevedzera maitiro emutemo, mitemo inoshanda kana zvikumbiro zvehurumende; (2) kusimbisa iyi Mitemo; (3) kupindura kune zvinoti chero zvirimo zvinotyora kodzero dzemapato matatu; kana (4) kuchengetedza kodzero, zvivakwa, kana kuchengetedzeka kwaAmaz Khamis, vashandisi vayo uye neruzhinji. Iwe unonzwisisa kuti kugadzirisirwa kwehunyanzvi uye kutumira kweSevhisi, kusanganisira zvirimo, zvinogona kusanganisira kutapurirana pane akasiyana materu uye shanduko yekuenderana uye kuenderana nezvinodiwa zvehunyanzvi zvekubatanidza ma network kana zvishandiso. Unobvumirana kuti Amal Khamis haana mutoro kana dhadha rekudzima kana kutadza kuchengeta chero chengetedzo inochengetwa kana yakamisikidzwa neDziviriro.
Nekugadzira account, unobvuma kuti iwe unogona kugamuchira email kutaurirana kubva kuna Amal Khamis, senge matsamba, zvipo zvakakosha, zviyeuchidzo uye kugadzirisa. Iwe zvakare unonzwisisa kuti iwe unogona kuzvibvisa iwe kubva kune aya kutaurirana nekudzvanya iyo "Unsubscribe" chinongedzo mutsoka yeiyo chaiyo email.
Masevhisi edu anosanganisira nhamba hombe yezvinhu zvinonzi pamwe chete "Nhaurwa dzeKutaurirana." Izvi zvinosanganisira masevhisi akadai sekutaura tambo, mablog mablog, mibvunzo uye mhinduro zvigadzirwa, maforamu evatengi ekutaurirana, uye mamwe masevhisi emeseji. Unobvuma kushandisa maCommunication Services chete kutumira, kutumira, uye kugamuchira mameseji kana zvigadzirwa zvakakodzera uye zvine chekuita neiyo chaiyo Kutaurirana Service. Paunenge uchishandisa Kutaurirana Service, unobvuma kuti iwe hauzoite chero chinotevera:
Kusvibisa, kushungurudza, kushusha, kukanda, kutyisidzira kana kusaputsa kodzero dzevamwe zviri pamutemo.
Shambadza, tumira, tambanudza, ugovera kana kuparadzira chero mazita, zvigadzirwa, kana ruzivo rwunonzi rwakakodzera, kusvibisa, kusvibisa, kukanganisa, kunyangadza, kusazvibata, kana zvisiri pamutemo.
Gadzira chiziviso chenhema, umiririre seumwe munhu, kana kusaina chibvumirano semumwe munhu kana pachinzvimbo chemumwe munhu kana kuti zvimwe unonyepedzera kana kudzima mufaira rakarindwa chero hunhu hwakakosha kana chiziviso.
Isa mafaera ane software kana zvimwe zvinoshandiswa zvakachengetedzwa nemutemo wepfuma wepfuma kana nekodzero dzekuvanzika kana yeruzhinji kunze kwekunge
uri wako kana unodzora kodzero dzinodiwa, kana
iwe wagamuchira zvese zvakakodzera zvibvumirano kuti udaro.
Pakira mafaira akaora, mafaera ane hutachiona, kana chero mafaera anogona kukuvadza mashandiro ekomputa yeumwe.
Shambadzira, kupa kutengesa, kana kuendesa kutenga chero chinhu nekuda kwebhizinesi kunze kwekukosha chero chero ipi zvayo Yekukurukurirana Service inonyatso bvumira zviitiko zvakadaro.
Rambidza kana kudzivirira chero mumwe mushandisi kubva mukushandisa uye kunakidzwa neCommunication Services.
Kukohwa kana kuti zvimwe unganidza pachako ruzivo runozivikanwa nezvevamwe, pasina mvumo yavo.
Kutyora chero kodhi yemafambiro kana mamwe marongedzero, ayo anogona kuve anoshanda kune chero imwe nzvimbo Yekukurukurirana Service.
Kutyora chero mitemo inoshanda kana mirau.
Kunyangwe hazvo VaAmam Khamis vasina chisungo chekutarisa Communication Services, isu tine kodzero, mukufunga kwedu, kuongorora uye kubvisa zvinhu zvakaiswa kuCommunication Service, izere kana chikamu. Amal Khamis anochengetera kodzero yekufumura chero zvigadzirwa zvakatumirwa, ruzivo kana chiitiko sezvazvinodiwa kuti agutse chero mutemo unoshanda, mutemo, maitiro emutemo, kana kukumbira kwehurumende.
HAPANA KUSVANYA KANA KUTI USHURE USHURE
Iwe unogona chete kushandisa maSevhisi edu kana iwo asingapesani kana kutyora mirau yemasimba (s) ako. Kuwanika kweMasevhisi edu munzvimbo yako (s) hakusi kukoka kana kupihwa naAmal Khamis kuti uwane kana kushandisa webhusaiti yedu kana maSevhisi. Nekushandisa maSevhisi edu, iwe unobvuma wega mutoro wekuti iwe kana chero nhengo yemhuri yekushandisa kana kuwana maSevhisi edu haatyori chero anoshanda mitemo mudunhu (s) rako. Kumisikidza ichi gadziriro, Amal Khamis anochengetera kodzero yekuramba kuve nhengo, kana kumisa kana kumisa account yako nekukasira uye pasina chiziviso chemberi pakuziva kwedu chete.
Izvi zvinotevera zvakasarudzika kana kurambidzwa:
Shandisa maererano nenyaya chero yepamutemo iri yakapusa, isiri yepamutemo kana isiri pamutemo muzvisikwa, sezvakatemwa naAmal Khamis kana Gweta rakadzvanywa mukuzvisarudzira kwavo;
Shandisa maererano nechinhu chero chipi zvacho chepamutemo chinosanganisira mhosva inoparwa.
Shandisa maererano nenyaya chero yemutemo inosanganisira iyo mitemo yekutonga iri kunze kweUnited Arab Emirates kana zvikamu zvayo;
Shandisa zvine chekuita nenyaya ipi neipi yepamutemo iwe parizvino kana yaunofanirwa kumiririrwa nezano repamutemo.
Shandisa maringe nenyaya ipi neipi yemutemo iyo, sekutemerwa kweMutumwa Akadomwa nenzira yake yekusarudzika, inoshaya kukwana kwakakodzera kunotsvakirwa, kana yakakwidzirwazve kuwanda kana kusingafungidzike nguva dzisingachinjiki mumamiriro ezvinhu;
Shandisa zvine chekuita nechero nyaya yepamutemo iyo inotaura zvakananga kana zvisina kunangana chero Rondedzero Gweta kunze kweye zano rako;
Shandisa zvine chekuita nechero nyaya yepamutemo iyo inotaura zvakananga kana zvisina kunangana neAmal Khamis kana chero vapi zvavo vanobatana nayo, maerekenisi, vamiririri, vashandi, kana vamwe vaAmandla Khamis vanopa vashandi. kana
Shandisa zvine chekuita nechero chinhu chepamutemo icho chako Chirongwa Chekutsigira chine nharo dzakashata, kana mune chero mukuru, mukuru, mumiriri kana mushandi wazvo ane kufarira kwakashata. Nezvinangwa zvechirongwa ichi, "Chirongwa Chekutsigira" zvinoreva chero kambani, sangano kana mubatanidzwa unotenga kana kupa panzvimbo yenhengo dzayo kana vashandi, chirongwa chepamutemo cheAmal Khamis kuburikidza nemachira akawanda, nzira dzekutengesa kana zvimwewo. Ndokumbira kuti uone yako Program Sponsor yezve zvimwe zvinorambidzwa.
Iwe haugone kubiridzira, "kukwenya" kana "kukambaira" Rocketlawyer.com kunyangwe zvakananga kana kuburikidza nevamiririri vakadai senge madandaude, marobhoti, zvinokambaira, zvinokanya, kuisira, maframes kana RSS feeds, kana kuwana kana kuedza kuwana chero ruzivo Amal Khamis haana nechinangwa chakaitwa kuti chiwanikwe kwauri pawebhusaiti yayo kuburikidza nekutenga kunyoreswa. Kushandisa kwako webhusaiti yeAmal Khamis hakukupi mvumo yekutengesa chero zvemukati zveAmal Khamis pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa kare kubva kuna Amal Khamis.
Zvichienderana nekuterera kwako neMitemo iyi, uri kupihwa rezinesi risingasarudzike, risingapfuure, risingachinjiki, rezinesi rekushandisa maSevhisi sezvatinotarisira kuti zvishandiswe. Semunhu akanyoreswa mushandisi weAmal Khamis, iwe unobvumidzwa kuchengeta, kune ako pachako marekodhi, emagetsi kana epanyama makopi emagwaro awakagadzira paAmal Khamis. Iwe haugone kuteedzera zvirimo zvemafomu eAmal Khamis kana zvibvumirano zvekushandisa kana kutengesa kunze kweAmal Khamis. Chero kodzero dzisina kupihwa pachena muMitemo iyi dzakachengetedzwa naAmal Khamis.
Paunotumira zvinyorwa zvemushandisi pane zveAmal Khamis, iwe unopa Amal Khamis pamwe nevanoenderana navo kodzero isingaenzaniswi, yehumambo, isina chisingapindiki uye inonyatsoshandisa kodzero yekushandisa, kubereka, kushandura, kushandura, kushandura, kushandura, kugadzira zvinobva pamabasa kubva, kugovera. , ita uye uratidze chero zvakadaro, kusanganisira pasi rese mune chero midhiya. Kana iwe ukatumira mhinduro kana mazano nezvedu maSevhisi, tinogona kushandisa mhinduro yako kana mazano pasina chisungo kwauri.
Amal Khamis anochengetedza zvese zvakanaka, zita uye kufarira uye kune masevhisi ayo, kusanganisira, pasina kumuganhurira, zvinyorwa, girafu, mifananidzo, marika, marevhisi ebasa, mapikicha, mifananidzo, mavhidhiyo, mimhanzi, uye kodzero dzese dzakabatana dzeuchenjeri. Kunze kwekunge zvapihwa neimwe chibvumirano ichi, iwe haugone, uye haungatenderi vamwe kuita: kubereka, kushandura, kushandura, kuwedzera, kuuraya, kusandudza injineri kutengesa, rezenisi, zvimedu, renji, kubhadhara, kuparadzira, kopi, kuratidza pachena, shambadza, shongedza, shandura kana kugadzira zvinobva pamabasa ezvese zvigadzirwa nemasevhisi;
Mawebhusaiti eAmal Khamis anogona kunge aine zvinongedzo kune vechitatu zviwanikwa uye mabhizinesi paInternet, anonzi pano "zvinongedzo" kana "Nzvimbo Dzakabatana." Izvo zvinongedzo zvinopihwa kuti zvive nyore kukubatsira iwe kuona uye kutsvaga zvimwe zveInternet zviwanikwa zvinogona kukufarira. Amal Khamis haatsigire uye haabatanidzwe zviri pamutemo nechero munhu wechitatu "akabatanidzwa masosi." Amal Khamis haatenderwe zviri pamutemo kushandisa chero zita rekutengeserana, rakanyoreswa chiratidzo, logo, chisimbiso chepamutemo kana copyright zvinhu zvinogona kuoneka mune iyi link.
Amal Khamis haatonge, kutsigira kana kutarisa zvirimo mune chero nzvimbo Yakanongedzwa. Izvo zvinosanganisira, pasina kumuganhurira, chero chinowedzera chinongedzo chiri muInbatanidza Nzvimbo, uye chero shanduko kana gadziriso kune Yakabatanidzwa Nzvimbo. Amal Khamis haasi iwo mutoro wekubhuroka kana chero imwe nzira yekutumira yakagamuchirwa kubva kune chero yakabatanidzwa Webhusaiti. Iyi Mitsetse haifukidze kudyidzana kwako neSymbed Sites. Iwe unofanirwa kuongorora nekuchenjera mazwi nemamiriro uye zvakavanzika marongero eesitatu mapato.
Kana iwe ukashandisa chero sevhisi yakapihwa pane Yakabatanidzwa Saiti, (a) Amal Khamis haazove nemhosva kune chero chiito kana kusiiwa kweyechitatu, kusanganisira wechitatu mukana kuwana kana kushandisa yako mutengi data uye (b) Amal Khamis haadaro. warandi kana kutsigira chero basa rinopihwa nevechitatu bato.
DZIDZISO YOKUDZOKA UYE RUDZIDZO
Ruzivo rwakagashirwa kuburikidza neAmal Khamis harufanire kuvimbwa narwo pamusoro pezvisarudzo zvemunhu kana zvemutemo. Iwe unofanirwa kubvunza nyanzvi yakakodzera kune rakananga zano rakanangana nemamiriro ako ezvinhu. Muchidimbu, kushandisa kwako maSevhisi edu kuri pangozi yako wega.
KUNE ANOGONESESA ANOGONESESWA MUTEMO, AMAL KHAMIS NEVANHU VANOBATSIRA, VATENGESI NEVANOGADZISA VANOGONA KUTI VASHURE, KANA KUTAURA KANA KUSIMBISWA, PAMUSORO PEMAHARA. MABASA ANOPIWA PASI SEZVAKO. UYE "ZVINOWANIKWA" NZVIMBO. TINONYANYA KURATIDZA ZVESE ZVIMWE ZVIMWE ZVIMWE ZVOKUDZIDZA, KUKWANISIRA CHINANGWA CHINONYANYA NEZVISINA MHOSVA. INFORMATION NEZVIMWE ZVINOGONESESWA VIA WEBSITE HAIFANIRA KUVIMBISWA PAMUSORO PAMUNHU, CHIPATARA, CHEMAZANO KANA MARI ZVISARUDZO UYE UNOFANIRA KUKONZESA ANOFANIRA ANOGONESESA PAMUSORO PAMUSORO PAMWE MAZANO AKAKOSHESWA KUNE MHAKA YAKO.
TO TO FULLEST EXTENT PERMITTEDED by LAW, IN HAKUNA Chero KUNA AMAL KHAMIS, ZVINHU ZVINOGONESA, Vatsigiri kana DHIKI ZVINOGONA KUKANGANYIRWA NEMUNYENGI WEMhando, NEMPENYU, DZIMAI, PUNYANYA, MUFANANIDZO KANA ZVINOKOSHA ZVINOGONESA, KUSVIRA PASI NEZVINHU ZVINOKOSHA, VANZVO KURE HAINA AMAL KHAMIS VAVANYENGESWA NEZVANZWA ZVEZVINHU ZVINONYANYA, uye VAKATSVIRA KANA VANOTORA ZVINOKOSHA ZVESE ZVESANGANO.
AMAL KHAMIS DZVINOGONA HAPANA RUDZIMBUI Kana KUKANGANYA Chero chinhu Chero Chero KUSVIRA MABHUKU ANOGONESWA NEMUNYANI PAKUTI UNOGONESA KANA KUTI PESI PESI NEWEBSITE YAKO, uye Chero KUSHANDISA KANA KUTI URI KUTI URI KUTI URI URI KUTI URI KUTI URI URI KUTI URI KUTI URI URI KUTI URI KUTI URI KUTI URI
AMAL KHAMIS ANOGONESESA KUSUNGWA KWEMAZVIMBO OSE AVA NECHOKWADI NEZVINOBATSIRA HAZVIITWE CHIKAMU CHINOSVITSA GURUER RAMA $ 500 KANA CHIMWE CHIMWE CHIMWE CHINOBHADZWA NAWE AMAL KHAMIS KWEMAZUVA gumi nemaviri KUPENGA MABASA MUMUBVUNZO.
KUSunungura UYE RUDZIMAI
Panzvimbo yako uye vako vadyi venhaka, vatongi, vamiririri, vamiririri, uye vanopa, kusunungura zvizere, kusunungura zvachose, uye bata Amal Khamis, wako Chirongwa Sponsor uye vanobatana navo uye avo avo mahofisi, vashandi, madhairekita uye vamiririri vasina chakaipa kubva kune chero uye kurasikirwa kwese , kukuvara, kushandisa mari, kusanganisira zvinonzwisisika zvema gweta, kodzero, zvirevo, uye zviito zverudzi uye kukuvara (kusanganisira kufa) zvinobva kana zvine chekuita nekushandisa kwako seSevhisi. Unobvuma kuti kuburitswa uku kwakabvumirwa zvakasununguka uye nekuzvidira uye unosimbisa kuti unonyatsonzwisisa zvauri kubvumirana nazvo.
Unobvuma kuregerera uye kubata Amal Khamis, wako Chirongwa Sponsor uye vanobatana navo uye nevavanomiririra maofficial, vashandi, madhairekita uye mumiririri asingakuvadzi kubva kune chero uye zvese kurasikirwa, kukuvara, mari, kusanganisira zvine musoro magweta 'fizi, kodzero, zvirevo, zviito zverudzi rupi zvarwo. uye kukuvara (kusanganisira kufa) kunobva kune chero chechitatu bato zvine chekuita nekushandisa kwako seSevhisi, kutyora kwako Mitemo iyi kana kutyora kwako chero kodzero dzeumwe.
Iyi Midemo inodzorwa nemitemo yeUnited Arab Emirates.
Iyi Mitauro inoumba chibvumirano chose pakati pako naAmaz Khamis zvine chekuita nenyaya yeiyi Mitemo, uye supersede uye chinotsiva chero zvimwe zvibvumirano zvakatangira kana zvekufungidzira, kana mitsara uye mamiriro ezvinhu anoshanda nenyaya yezvinyorwa izvi. Iyi Mitemo inogadzira hapana wechitatu mubatsiri kodzero.
WAIVER, KUKUNDIKANA UYE KUVAKA
Kukundikana kwedu kumisikidza gadziriro haisi yekuremekedza kodzero yayo yekuita gare gare. Kana gadziriro ikawanikwa isingasimudzirwe, zvasara zvasara zveMigariro zvicharamba zvichishanda uye izwi rinomisikidzwa rinotsiviwa kuratidza chinangwa chedu zvakanyanya sezvinobvira. Iwe haugone kupa chero kodzero yako pasi peMigariro iyi, uye chero kuedza kwakadai kuchave pasina. Amal Khamis anogona kupa kodzero dzayo kune chero upi zvake wemubatanidzwa kana masangano
Tinogona kudzokorora iyi Mitemo nguva nenguva, uye tinogara tichitumira yazvino shanduro pane yedu webhusaiti. Kana kudzokorora zvine chinangwa kuchidonhedza kodzero dzako, tinokuzivisa (ne, semuenzaniso, kutumira pane yedu blog kana pane ino peji). Nekuramba uchishandisa kana kuwana maSevhisi mushure mekunge shanduko dzatanga kushanda, unobvuma kusungwa neMitemo yakagadziridzwa.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza nezve yako kushandisa iyi chikuva, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu ku: kesi@wemhiri.com kana kudana + 971 50 6531334.